Homo Loves: * Three Star King* *ကေသုံးလုံး*
အာဘာလဲကွာ ဒီနေ့က စနေနေ့လေ ကျောင်းသွားစရာမှ မလိုတာအိပ်ကောင်းနေပါတယ် ဆိုမှ ဟုစကားသံ ခပ်မာမာဖြင့် အခန်းအပြင်ဘက်တွင် ရှိသော ဒေါ်ဒေါ်ဝင်းရဲ့ သမီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီမ တစ်ဝမ်းခွဲ ၀ါဝါ အား ကုတင်ပေါ်မှနေလျှက် ခပ်မာမာ အောက်ငှေါက်လိုက်လေသည်…။
ဟုတ်ဘူး အောက်မှာမှာ ဘေးအိမ်က အကို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ရောက်နေလို့…။
ဥက္ကာမာန် နဲ့ မုဏ်းမာန်ခ လား
ဒါဆိုလဲ အခန်းထဲ တက်ခဲ့လို့ ပြောလိုက်ဟာ.. ငါ အိပ်ခြင်နေသေးတယ် ဟု ဆိုလျှက် ဟိုနှစ်ကောင်ကို စိတ်တွင်းမှ ကျိန်ဆဲနေလေသည်..။ သိပ်မကြာ လှေကားမှ တက်လာသော ခြေသံ တစ်ခု နှင့်အတူ အခန်းတံခါး ဖွင့်သံ ကြားရပေသည်…။
ကျွန်တော် တို့ သုံးယောက်သည် ငယ်ကတည်း ကလေးပေါက်စ အရွယ်ထဲက ဒီဗန်မော်မြို့.. ကုက္ကိုလ်တော ရပ် တွင် ခြံခြင်းကပ်လျှက် နေထိုင်ခဲ့ကြလေတာ ကျွန်တော် ဆိုလျှင် PHILO ( အတွေးအခေါ်) . ကျွန်တော့ထက်7 ရက်ကြီးသော ကိုဥက္ကာမာန် ဆိုလျှင် CHEMISTRY ( ဓာတု )
ကျွန်တော့ထက် 7ရက် ငယ်သော မုဏ်းမာန်ခ မှာ PHYSICS ( ရူပ ) အသီးအသီး ယူလျှက် မန်ခိန် ဘက်တွင် ရှိသော ဗန်မောမြို့ဧ။် တစ်ခုတည်းသော နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တွင် SECOND YEAR သို့တိုင် တက်ရောက်လျှက် ရှိပေသည်။
ဥက္ကာမာန်ဆိုလျှင် အရပ်အမောင်းကောင်း -် ပါဖြောင့်သောကြောင့် လည်းကောင်း . မုဏ်မာန်ခ ဆိုလျှင် အသားညိုလျှက် စကားကြွယ်သည်က တစ်ကြောင်း..ကျွန်တော်ဆိုလျှင် ခန္ဒကိုယ် အချိုးအစားကျလှပြီး အသားဖြူခြင်း အပြောကြွယ်ခြင်းကြောင့် တက္ကသိုလ်တွင် KING ဖြစ်နေပေသည်။
သုံးယောက်သား ခိုက်ရန် ဒေါသ မဖြစ်ခြင်း တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ကြင်နာကြခြင်း ရုပ်ချောကြခြင်း တို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်တွင် ကောင်မလေးများဝိုင်းဝိုင်းလည် ဖြစ်နေပေသည်..။
ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်ကလည်း ဖြစ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံ သည်က တစ်ကြောင်း ကလေး အတွေး သာသာတာ ရှိသေးသည့် မုဏ်းမာန်ခမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကုတင်ပေါ်တွင် မှောက်လျှက်မိန်းနေသော ကျွန်တော့်ကုတင်ထက်သို့ ကျော်ခွတက်လျှက် တစ်ဖက်နံရံ စောင်းတွင်ကျောမှီကာ ကျွန်တော့ကို အတင်း ပက်လက် လှန်စေလျှက် Underwear အောက်သို့ သူဧ။် ညာလက် လျှိုသွင်းကာ ကျွန်တော့ညီဘွားကို ညင်သာစွာ ကိုင်လျှက် ကစား နေလေသည်…။
မုဏ်း ဖြေးဖြေးဆော့ ကိုမနေ့ညက ကိုယ့်ဆော်နဲ သွားဂျုတ်ထားတယ်။
အင်းပါ ကိုနှိုင်းမခရ ဟု မုဏ်းနှုတ်ဖျားမှ ချွဲပြစ်စွာ ဖြေလျှက် ကျွန်တော့ညီဘွားကို ကြည့်နေပေသည်။
မုဏ်း မင်းကတော့နော် အခုပဲစားပြီးခဲ့တာ မ၀သေးဘူးလား ကွာဟု ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် ဥက္ကာမာန် မှာ အခန်းတွင်းတို့ ၀င်လျှက် တံခါး ကိုလော့ချ လိုက်လေသည်။
ကာကာ့ဟာက ငါးလက္မ တောင်မပြည့်တာ ပြီးတော့ ကိုနှိုင်း လောက်လည်း မတုတ်ပဲနဲ့ လုပ်ပြန်တော့လည်း ခနလေးနဲ့ ပြီးတာ မဟုတ်လို့လားဟု မုဏ်းမှာ ပြန်ပက်လေသည်။
ဟာကွာ မင်းတို့ကလည်း စောစောစီးစီး နှိုင်းအိမ်မှာမှ စကားလာဖြစ်ရတယ်လို့ ဖြစ်ပါလား မင်းတို့အိမ်မှာ…။
ဖြစ်ခြင်လွန်းလို့ တော့မဟုတ်ဘူးဟေ့ ဒီနေ့နေ့လည်2နာရီ ကျောက်စခန်းကို သွားဖို့ကိစ္စလေ မနေ့က ဆရာမှာထားတာ အဲ့ဒါ လာပြောတာ မင်းမေ့နေပြီလားကွ ဟု စကားကို သူ့အကျင့်အတိုင်း ဘောက်ကျကျ ဖြေလာသည်ကတော့ ဥက္ကာမာန် ခေါ် ကာကာ ပင်ဖြစ်လေတော့သည်။
အော်အေးဟုတ်သားပဲဒါဆို ဥက္ကာ ဆရာဦးရဲမြင့်ကို ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲဆိုပြီး ဖုန်းဆက်မေးလိုက်ကွာ ပြီးရင် ငါ့အ၀တ်အစား နဲနဲပါးပါး လွယ်အိပ်ထဲ ကောက်ထည့်ထားပေးနော်ဟု ဆိုလျှက် ကျွန်တော့ ညီဘွားကို ကိုင်ထားသော မုဏ်းဧ။် လက်များကို ညှင်သာစွာဖယ်စေကာ ရေချိုးရန် ပြင်ဆင်လေတော့သည်။
ငါက ဖုန်းဆက်တာက ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်ရမှာလည်း
ရော ခက်ပြီကော မင်းကောင်မလေး ၀ယ်ထားပေးတဲ့ ဖုန်းနဲ့ ဆက်လိုက်ပေါကွ
ဒါဆိုလည်း စားပွဲပေါ်မှာငါ့ဖုန်းတင်ထားတယ် အဲ့ဒါ နဲ့ဆက်လိုက် မင်းကလည်း… ကျီးကများနေသေး..ဟုဆိုကာ ရေချိုးခန်း တွင်းသို့ ၀င်ရန် အခန်းနှင့်ကပ်လျှက် ရေချိုးခန်းတံခါးကို ဖွင့်လေတော့သည်။
နှိုင်း ….. မုဏ်းကော ရေလိုက်ချိုးမယ်လေ
ဒီကောင် ရေလိုက်ချိုးမည် ဆိုသည့်အကြောင်းကို ကျွန်တော် က ရယ်လျှက် အေးညီ ကိုယ့်ခေါင်းအုံးအောက်က ကွိုင်ထုတ်တော့ ယူခဲ့ကွာဟု ဆိုလိုက်လေသည်။
ဟာ ဟုတ်ပြီ ယူခဲ့မယ်ဟုဆိုလျှက် ရေချိုးခန်းတွင်းသို့ မုဏ်းပါ လိုက်ဝင်ခဲ့လေသည်…။
------------------- ------------------------- ---------------------------------------------
*ကျောက်စခန်း သို့ အလည်တစ်ခေါက်*
နှိုင်းမခ တို့ ကားနဲ့ လိုက်မယ်လေ
ဒါဆိုရင် သမီးကား မယူလာတော့ဘူးနော် သူငယ်ချင်းကားနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ် ဆရာ့ အိမ်မှာ သမီးကား ထားခဲ့ရင် ရတယ်ဟုတ်
ဒါဆိုကားက ခု ဘယ်နှစ်စီး ရှိသလဲ သမီး
ဟုတ် သမီးကားကောအပါဆို ငါးစီး ရှိတယ်
ဒါဆို လဲမယူခဲ့နဲ့တော့လေ လူရှိတာကမှ ဆရာကော အပါ 16 ယောက်ထဲမလား
ဒါဆို ၀ယ်စရာရှိတာတွေကော ၀ယ်ပြီးပြီလား
သွားလို့မရသေးဘူးလေ ဆရာ နှိုင်းမခ တို့ မရောက်လာသေးဘူး
ဟေ ခနကမှ မြင်ပါသေးတယ် ဘယ်သွားကြသလဲ
ဟုတ် spy သွားဝယ်မယ်လို့တော့ ပြောသွားတာပဲ
ဟေ ဒီ ကင်းသုံးကောင် ကတော့ လုပ်ပြန်ပြီလေ….။
ဆရာဦးရဲမြင့် နှင့် ကျွန်တော်တို့ ကင်းသုံးယောက် နှင့် အခြား ကျောင်းသားလေးယောက် / ကျောင်းသူ ခွန်နှစ်ယောက် ပါသည့် ကားလေးစီး သည် ဗန်မောမြို့နှင့် သိပ်မဝေးလှသော ကျောက်စခန်း အပန်းဖြေ စခန်းသို့ ညနေ လေးနာရီခွဲခန့်တွင် ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပေသည်။ သူတစ်လူငါတစ်မင်း ဖြစ်နေသည် ကျောင်းသားတွေကို ထိန်းနေရသော ဆရာ့ကို ကြည့်လျှက် ညကျလျှင် အိပ်စက် အနားယူရန် တဲထိုးနေကျသော ကျွန်တော် တို့ သုံးယောက် စကားတစ်ပြောပြောဖြင့်… ပြင်ဆင်နေလေသည်။
ပျော်ပွဲစား ခရီး ထုံးစံအတိုင်း လုပ်စရာရှိသည်များကို လုပ်လျှက် မိန်းကလေးများမှာ ချက်ပြုတ်ကြလေသည်။ ထို့နောက် ယောက်ကျားလေး တွေ မိန်းကလေးတွေ သောကောရောကော. ဖြင့် Game Play လျှက် ရေတံခွန်တွင် ရေချိုးကြလေတော့သည်…။ ည ရှစ်နာရီတွင် ဆရာနှင့်တကွ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအားလုံး မီးပုံ နံဘေးတွင် သူ့အစုနှင့်သူ ၀ိုင်းဖွဲ့ထိုင်လျှက် ဆရာဧ။် ဟာဟ ပျက်လုံး များကို နားထောင်ကာ ၀ယ်ယူလာသည့် spy သောက်လိုက် မီးပုံတွင် ကင်ထားသော ကြက်ကင်ကို ဖဲ့စားလိုက်နဲ့ အရှိန်ရနေပေသည်။
ကဲ ဒီညတော့ ဒီလောက်ပဲ အိပ်ကြတော့ မနက်ရောက်ရင် စောစောထ ဆရာတို့ တောင်ပေါ်တက်ကြည့်ရအောင် ဟု ဆရာဦးရဲမြင့်မှ ဆိုလာလေလျှင်..ကျွန်တော်တို့လည်း အသီးသီး ကိုယ့်တဲကို သို့ ၀င်ရောက်လာပေသည်။
တဲအိမ်ဆိုသော်လည်း ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့် ကိုယ်မို့ အပြင်ဘက်မှ မမြင်ရလေအောင် လုံခြုံစွာ ကာရံထားလေသည်။ တဲအိမ်ငယ်ထဲတွင် အိမ်မှာယူလာသော မွေ့ယာကြီးကြီးကို ခင်းထားလျှက် ခေါင်းအုံးသုံးလုံး စောင်သုံးထည်ဖြင့် သုံးယောက်သားတူယှဉ်တွဲကာ အိပ်ကြလေတော့သည်။
သိပ်မကြာလိုက် လိုက် မုဏ်းမှာ ဇတ်လမ်းစလာပေသည်..။
အလယ်မှာအိပ်နေသော ကျွန်တော်မှ မုဏ်း အနမ်းပွင့်ခြွေလာသည်ကို ညှင်သာစွာ ပြန်အနမ်းပေးလျှက် နှစ်ယောက်သား ကက်ဆင် ရိုက်နေပေသည်…။ မူးနေသော ဥက္ကာမှာ.. စိတ်လာနေသည့်ထင်..ကျွန်တော့်ညီဘွားကို သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားဖြင့် ပွတ်သတ်လျှက်… မုဏ်းဧ။် ညီဘွားကို လက်ဖြင့် စွပေးနေလေသည်…။
သုံးယောက်သား ထိုသို့ ပြုလုပ်လျှက် မုဏ်းမှာ…ကျွန်တော့ကို ခွကျော်ကာ..အလယ်တွင် အိပ်စက်လျှက် ဘေးတိုက် အနေအထား သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇတ်လမ်းကို ခင်းကြပေတော့မည်…။
အလယ်မှာအိပ်နေသော ကျွန်တော်မှ ဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးတွင် ရောက်ရှိသွားလျှက် မုဏ်းမာန်ခ ခေါ် မုဏ်းကို ညီဘွားဖြင့် သူ့ခရေတွင် ထောက်လျှက် လည်ပင်းကျော လည်တိုင်လေးကို အနောက်ဘက်ကနေ လျှာ အနမ်းပွင့်ဖြင့် ညှင်သာစွာ ခြွေချပေးနေသည်။
မုဏ်း တစ်ယောက်မှာ.. သူ့ညီဘွားကို ကိုင်လျှက် ကွိုင်စွတ်ကာ..ဟိုဘက်လှည့်နေသော ဥက္ကာ ခရေပေါက်သို့ ထည့်လေတော့သည်။
အာကာ ကလည်း ဖြည်းဖြည်းပဲလေ.ဒီမယ် ဒစ်ပဲဝင်သေးတယ်..နာနေလို့လား
သူတို့ နှစ်ယောက် စကားပြောလျှက် SEX ဖြစ်နေသည်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ကွိုင်ကို စွတ်ကာ.. ညီလေး မုဏ်းမာန်ခ ခရေ ၀တွင်တေ့လျှက် အနောက်ကနေ.. တစ်ဖြေးဖြေးခြင်း ထိုးသွင်းနေပေသည်..။
သုံးယောက်သား တစ်ဆောင်းလုပ်နေရင်းနှင့်မျှ မုဏ်း မှာ မျိုးဥုများ ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်ကို ကျွန်တော် သိလိုက်ပေသည်..အကြောင့်မှာ သူ့ခရေတွင်း တွင် ဆောင့်ဆောင့်နေတော့ ကျွန်တော့ ညီဘွားကို လာညစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်…။
ဒါနှင့် ကျွန်တော် လည်း ကွိုင် အသစ် တစ်ခုနှင့်လှဲလှယ်ကာ… ညီဘွားကို ဦးထုတ်စွပ်ပေးလျှက်… မုဏ်း မှာ မှောက်ယှက်ခုံ အိပ်နေလျှက် ဥက္ကာမှာ အလယ်တွင်နေလျှက်.. မုဏ်းဧ။် ခရေထဲသို့ သူဧ။် ညီဘွားကို မမြင်မစမ်း ထည့်နေပေသည်.သိပ်မကြာ ကျွန်တော်လည်း… ဥက္ကာ ဧ။် ခရေတွင်းသို့ ညီဘွားကို သွတ်သွင်းကာ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇတ်လမ်းကို ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီး ပုစဉ်းရင်ကွဲသံများသာ ကြားနေရသော.. ကျောက်စခန်းဧ။် တိတ်ဆိတ်လှသော တဲအိမ်ငယ်ထဲတွင် အချစ်ဇတ်လမ်းများ ခင်းနေကြပေတော့သည်…။
-------------------------------- ----------------- --------------------------------
*ဥက္ကာကို နှုတ်ဆက်ခြင်း *
အေးကွာ ဥက္ကာ ဟိုရောက်ရင် ကျန်းမာရေးကရုစိုက်ပါ အချိန်မှန်အိပ် အချိန်မှန်စားပါကွာ. နယ်ပြောင်းမြေပြောင်းဆိုတော့ ပထမ ရောက်စ တစ်ရက် နှစ်ရက်တော့ ရေချိုးတာက အစ ဂရုစိုက်ပါ ဟုတ်ပီလား သူငယ်ချင်း..။
ကာကာ ကို မုဏ်း အမြဲတန်းသတိရနေမယ်နော်သိလားဗျ
အေးပါကွာ ညီလေးတို့လည်း လိမ်လိမ်မာမာ နေကြနော်… အပြင်မှာမတွေ့ရတော့ပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရမှာပဲပေါ့ကွာ ဟုတ်ဘူးလား
လေယျာဉ်ထွက်တော့မယ် ကိုသွားတော့မယ် နော် ဘိုင်း..
ဒီလိုနှင့် မုဏ်းမာန်ခ ခေါ် ကျွန်တော့ငယ်သူချင်း မုဏ်းနှင့် ကျွန်တော် ****ဥက္ကာ လိုက်ပါသွားသည့် လေယျာဉ်ကြီး အဝေးကို ထွက်ခွာသွားချိန်ထိ ငေးကြည့်မိကာ နှစ်ယောက်သား လေယျာဉ်ကွင်းကို ကျောခိုင်းလျှက် လက်ခြင်းချိတ်ကာ.. တစ်ယောက်ပုခုံးကို တစ်ယောက်မှီလျှက် အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့လေတော့သည်.။
၀န်ခံချက်။ ။ ယခု story နှင့် ပတ်သက်လျှက်
1 ။ ။ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ချို့ကို အခြေခံလျှက် ရေးသားထားသည်
2။ ။ အသုံးပြုသည့်နာမည် များမှာ သူငယ်ချင်းများဧ။် ပုဂ္ဂိုလ် ရေးကိုထိခိုက်သွားမည် စိုးသောကြောင့် အခြား အခြားသောနာမည် များကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3။ ။ ယခု ဘလော့ဖြင့် ပတ်သက်လျှက် မည်သူ့တစ်ဦး တစ်ယောက်ကို မျှ ရည်ရွယ် လျှက် ပုတ်ခတ်ခြင်း မဟုတ်ပါ
4/ Group Sex မရေးဖူးသောကြောင့် ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Min Lay at 8:04 AM
နေနေ November 22, 2014 at 9:34 PM